Top 5 túi ngủ cho bé tốt nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 túi ngủ cho bé tốt nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ingabe ingane yakho inomkhuba wokukhahlela noma ukukhahlela ingubo lapho ilele? Ingabe kufanele uwele esimweni sokuthi njalo ngemva kwemizuzu engu-30 kufanele ugijime ukuze ulungise ingubo yengane yakho?
Ngecala elingenhla, isikhwama sokulala sizoba isiphakamiso esingcono kakhulu kuwe njengamanje. Kodwa-ke, ukukhetha ukuthenga isikhwama sokulala sekhwalithi akulula. Khona-ke ake ngikuphakamise izikhwama zokulala ukuze ingane yakho ithole ubuthongo obuhle kakhulu!
Mhlawumbe unentshisekelo: Amanabukeni ayi-6 angcono kakhulu ezingane 2020
1 Izikhwama zokulala ezi-5 eziphezulu ezisiza ingane yakho ukuthi ilale kahle ebusuku
1.1 Isikhwama sokulala esineziphu ezimbili esilula kakhulu i-Mipbi
1.1.1 Ukubuyekeza okusheshayo isikhwama sokulala se-Mipbi Super esinwebekayo esinezindlela ezimbili
1.2 I-Carter’s Baby Sleeping Bag
1.2.1 Isibuyekezo esisheshayo se-Carter Baby Sleeping Bag
1.3 I-cocoon yasehlobo yezingane
1.3.1 Ukubuyekeza okusheshayo I-cocoon yasehlobo yezingane
1.4 Ibhakede lekhanvasi lesikhwama sokulala sezingane
1.4.1 Ukubuyekeza okusheshayo kwebhakede lekhanvasi lesikhwama sokulala Sezingane
1.5 Isikhwama sokulala soboya bezingane
1.5.1 Ukubuyekeza okusheshayo kwesikhwama sokulala soboya bezingane
2 Imibandela yokukhetha ukuthengela izingane izikhwama zokulala
2.1 1. Izikhwama zokulala zilingana ukuze zilingane nomzimba wengane
2.2 2. Isikhwama sokulala esenziwe ngendwangu ethambile kakhulu
2.3 3. Isikhwama sokulala sifakwe uziphu
2.4 4. Izikhwama zokulala ziyathengeka
3 Imiyalelo yokusetshenziswa okufanele nokunakekelwa kwezikhwama zokulala
4 Isiphi isikhwama sokulala sezingane esingcono kakhulu?
4.1 Isikhwama sokulala soboya bezingane
Izikhwama zokulala ezi-5 eziphezulu ezisiza ingane yakho ukuthi ilale kahle ebusuku
Uphawu lokuhweba: I-Mipbi
Isikhwama sokulala esineziphu ezimbili esilula kakhulu i-Mipbi
Idizayini yeziphu engalungile
Ukubuyekeza okusheshayo isikhwama sokulala se-Mipbi Super esinwebekayo esinezindlela ezimbili
Impahla, ingqikithi 4-indlela yokwelula ukotini ithambile, ikhululekile. Idizayini uziphu igcina ingane ingagodoli.
Umkhiqizo okahle okokudlala ingane, umbhede wezingane, ukugoqa, ukuphuma, njll
Xem Thêm Messenger không hiện thời gian online có phải là lỗi không? | Muasalebang
Nokho, ngiyabona Ukwakheka kuziphu kwenza kube nzima ukushintsha amanabukeni. Ngaso sonke isikhathi uma ngiyishintsha, kufanele ngiyidonse kusukela phezulu kwehle, impela engalungile.
0-3 izinyanga, 3-6 izinyanga, 6-9 izinyanga
I-Carter’s Baby Sleeping Bag
Isibuyekezo esisheshayo se-Carter Baby Sleeping Bag
Isikhwama sokulala sengane ukotini othambile nofudumele wezwa. Omama Ingasetshenziswa esikhundleni sezingubo zokulala.
Idizayini ye-zipper elula, amasampula amaningi amakhodi omama ongakhetha kuwo.
Ngoba kuzwakala ukotini owugqinsi, kuphela ilungele isimo sezulu esibandayo noma Isetshenziselwa izingane emakamelweni ane-air conditioning.
Okwezingane ezingaphansi kuka-6m izokhululeka.
Kuzwakala ukotini othambile
0 – 9 izinyanga
I-cocoon yasehlobo yezingane
Ukubuyekeza okusheshayo I-cocoon yasehlobo yezingane
Izinto zikakotini. KungabanjwaIdizayinelwe ukuvumela ingane yakho ilale kangcono futhi ingathuki. Ingubo ingalungiswa ukuze ilingane nomntwanai-swaddling ingcono kakhulu nezingane ezivame ukuzisonta.
Ingxenye Isikhwama sonyawo singavela ukuze kushintshwe ngokushesha inabukeni ingane ngenkathi igcina ingane ikhululekile. Okwezingane ezinezinyanga ezi-0-6.
Nokho, umkhiqizo indwangu ithe mncaneungacabangela kufanele kwenziwe ehlobo enganeni lapho unina edinga ukuphuma.
Ngaphandle kwalokho, Isitika kulo mkhiqizo asisihleemva kokuwashwa oku-3 kuphela, ayisanamatheli kakhulu, ngakho-ke ingane idinga kancane ukuthi iphume.
0 – 6 izinyanga
Ibhakede lekhanvasi lesikhwama sokulala sezingane
Izinkinobho ziwugqinsi futhi ziqinile
Ukubuyekeza okusheshayo kwebhakede lekhanvasi lesikhwama sokulala Sezingane
Impahla, ingqikithi Indwangu ewugqinsi, ethambile, edonsa umjulukoayikubangeli ukushisa, i-squash, iphephile esikhumbeni esibucayi somntwana.
Isikhwama sokulala Sebenzisa esikhundleni sezingubo zokulalaingane yakho ngeke isaba nesisu esivulekile, iqolo elivulekile noma amakhaza lapho ikhahlela ingubo lapho ilele.
Isikhwama sokulala siseduze kwekhwapha, asinamikhono, ngeshwa sivalwe ngezansi kwesikhwama. Umkhiqizo Sebenzisa izinkinobho ezinhlangothini zombili zomzimba Ngakho-ke, abazali bangakwazi ukugqoka ingane kalula ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi ingane ingakhululekile lapho kufanele igqoke izendlalelo eziningi zezingubo ukuze zigcine umzimba ufudumele.
Okunye okubi engingakuthandi mayelana nomkhiqizo izinkinobho eziwugqinsi neziqinileg futhi lapho ingane ilele ngohlangothi Ukuyicindezela kuyobangela ubuhlungu bengane.
Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo awunayo inkinobho engezansi, ngakho-ke izobangela Izikhwama zokulala ziphushwa kalula phezu kwekhanda lapho ingane iginqika.
Uphawu lokuhweba: I-Hunibear
Isikhwama sokulala soboya bezingane
Ukubuyekeza okusheshayo kwesikhwama sokulala soboya bezingane
Engihlabe umxhwele ngomkhiqizo Umklamo omuhle, omuhle. Ngaphandle kukhona ungqimba loboya thambile, siza ukufudumala okwengeziwe ngengxenye ngayinye encane.
Ngaphakathi kukhona ikilasiIkotini ephefumulayo. Umkhiqizo ulungele kakhulu ukuthi omama bahambise ingane yabo ukuze igonywe, iphume noma lapho ingane ilele.
Ingasetshenziswa kokubili njengengubo nengubo ukusiza ingane yakho ilale kangcono ebusika obubandayo.
Nokho, ngokuhlangenwe nakho kwami Umkhiqizo mncane kancanekuye ngezinga lokushisa lendawo omama abangalicabangela.
Ngaphandle kunoboya, ngaphakathi kunokotini
Imibandela yokukhetha ukuthengela izingane izikhwama zokulala
Lapho ukhetha isikhwama sokulala sengane yakho, udinga ukucabangela izici eziningi ezahlukene. Ngokuvamile, ubukhulu besikhwama sokulala, impahla yesikhwama sokulala kanye nomklamo womugqa womkhiqizo. Ngokuvamile, isikhwama sokulala esiyikhwalithi kufanele sihlangabezane nalezi zindlela ezilandelayo:
1. Izikhwama zokulala zilingana ukuze zilingane nomzimba wengane
Isikhwama sokulala esincane kakhulu emzimbeni wengane ngeke sikwazi ukumboza ngokugcwele umuntu osemusha. Ngisho nesikhwama sokulala esiqine kakhulu senza umntwana azizwe engakhululekile futhi engakhululekile lapho efakwe ngaphakathi.
Kodwa uma umama ekhetha ukuthenga uhlobo olungalungile lwesikhwama sokulala, ubukhulu bukhulu kakhulu ngobukhulu bengane. Umkhiqizo uzokwenza kalula ukuthi ikhanda lomntwana lingene ngaphakathi. Lokhu kuyingozi ngempela ngoba kulula ukuthi umntwana aphefumulele phezulu aze afe engahlosile.
Iseluleko komama kuleli cala ukukhetha isikhwama sokulala esihambisana nomzimba wengane. Uma ukhetha ukuthenga izikhwama zokulala ezenziwe ngaphambilini, khetha usayizi oshiwo ngenani lezinyanga zomntwana.
Ngaphezu kwalokho, umama angakwazi futhi uku-oda isikhwama sokulala ngokuvumelana nobukhulu bomntwana. Isikhwama sokulala esenziwe ngomsiki sisiza izingelosi ezincane ekhaya zithole umuzwa okhululekile uma usebenzisa umkhiqizo.
2. Isikhwama sokulala esenziwe ngendwangu ethambile kakhulu
Ukuvikela kangcono isikhumba esincane, omama kufanele basebenzise izikhwama zokulala ezenziwe ngendwangu ethambile kakhulu. Kungaba isikhwama esenziwe nge-cotton spandex, noma impahla kakotini evame ukusetshenziselwa ukwenza izinto zokusula ubuso.
Kodwa uma ufuna isikhwama sokulala ongasisebenzisa kumntanakho ebusika, umkhiqizo kufanele ufakwe ngendwangu ye-polyester ngaphakathi. Lesi sendlalelo sendwangu sizosiza umkhiqizo ukwandisa amandla okugcina ukushisa.
3. Isikhwama sokulala sifakwe uziphu
Isikhwama sokulala esifakwe uziphu ngokuvamile sinikeza ukunethezeka okukhulu kunesikhwama sokulala esingenayo uziphu noma esifakwe inkinobho. Ngoba ngalesi sikhathi, omama bangavala isikhwama sokulala ngokushesha ngokudonsa okukodwa nje.
Kuye ngenani lezinyanga zengane yakho, kufanele ukhethe ukuthenga isikhwama sokulala esifakwe ama-zippers ezindaweni ezihambisanayo. Uma isikhwama sokulala sizosetshenziswa enganeni engaphansi kwezinyanga ezingu-6 ubudala edinga ukuguqulwa kwe-diaper ebusuku njalo, khetha umkhiqizo onoziphu otholakala endaweni ephansi yomzimba.
Kodwa uma isikhwama sokulala sisetshenziselwa izingane ezingaphezu kwezinyanga ezingu-6 ubudala, ungakhetha ukuthenga isikhwama sokulala esineziphu emzimbeni ongaphezulu. Noma isikhwama sokulala esine-zipper eseceleni sizokwenza.
4. Izikhwama zokulala ziyathengeka
Njengamanje, isikhwama sokulala esinentengo yokuthengisa esukela kumakhulu ambalwa ezinkulungwane zama-dong kuya ezigidini ezimbalwa zama-dong sijwayelekile ngokuphelele. Kodwa-ke, intengo enengqondo kakhulu yomugqa womkhiqizo ngokuvamile iwela kububanzi obungu-300,000 VND ukuya ku-1,000,000 VND.
Imodeli yesikhwama esithandwayo iqinisekisa izindinganiso zekhwalithi, kodwa inenani elithengekayo, okuyisinqumo esihle komama be-Bim.
Ithebula lokuqhathanisa lezikhwama zokulala ezi-5 eziphezulu ukusiza ingane yakho ilale kahle ebusuku
Ngezansi kunethebula lokuqhathanisa lezikhwama zokulala ezi-5 eziphezulu ukusiza ingane yakho ilale kahle ebusuku. Kuye ngengane yakho, ungakhetha umkhiqizo ofanele.
Imiyalelo yokusetshenziswa okufanele nokunakekelwa kwezikhwama zokulala
Uma ufuna isikhwama sokulala sikhuthaze izinzuzo zayo ezigcwele ngenkathi usaqinisekisa ukuphepha kwengane esanda kuzalwa, umama we-diaper kufanele asebenzise umkhiqizo ngokulandela imiyalelo engezansi:
Abazali kufanele banake izinga lokushisa ekamelweni ukuze banqume ukuthi bagqoke izingubo eziningi zezingane zabo. Uma izinga lokushisa liphansi kakhulu, gqokisa ingane yakho izingubo ezengeziwe. Kodwa ungagqoki izingubo eziwugqinsi kakhulu noma eziwugqinsi kakhulu, okwenza umzimba wengane ujuluke ungakhululekile.
Izikhwama zokulala zidinga ukuhlanzwa njalo zomiswe ngaphambi kokuba zisetshenziswe ezinganeni. Ngokuya ngezinto ezisetshenziselwa ukukhiqiza isikhwama sokulala, omama kufanele bahlanze umkhiqizo ngokwemiyalelo yomkhiqizi.
Esimeni lapho usebenzisa okokuthambisa indwangu lapho ugeza isikhwama sakho sokulala, khetha esisodwa esinephunga elimnandi ngokwemvelo. Lokhu kuzosiza ingane yakho igweme ukucasuka nokuba bomvu.
Uma ungasebenzisi isikhwama sokulala, omama kufanele balengise umkhiqizo phezulu noma bawugoqe kahle. Ngemuva kwalokho, udinga ukugcina umkhiqizo endaweni eyomile njengasekhabetheni.
Ungase ube nentshisekelo ku-:Imishini yokuwasha engu-5 ehamba phambili yezingubo ezihlanzekile
Isiphi isikhwama sokulala sezingane esingcono kakhulu?
Ngaphandle komphumela osebenzayo wokugcina ukufudumala nokuvimbela ukuphahlazeka, isikhwama sokulala sisenesici esikhulu esenza ingane izizwe icindezelekile futhi ifune ukuphuma. Lokhu kwenza abazali abaningi bazibuze: Ingabe kufanele ngisebenzise isikhwama sokulala sengane yami?
Kodwa udinga ukwazi ukuthi umuzwa wokuvinjelwa ezinganeni uvela kuphela ezinsukwini zokuqala lapho umntwana engasetshenziselwa ukusebenzisa isikhwama sokulala. Ngemva kwesikhathi eside elele esikhwameni esifudumele, umntwana uzojwayela futhi angabe esakwazi ukugoqa. Ngakho-ke, abazali kufanele basebenzise umkhiqizo ukwenza imikhuba emihle yokulala ezinganeni zabo. Ngesikhathi esifanayo, ukuvikelwa okuphelele kwempilo yengane.
Emazingeni okushisa avamile, ukushiya ingane yakho ingagqokile esikhwameni sokulala ngeke kubangele ukuba ingane yakho ibanjwe umkhuhlane. Kunalokho, le ndlela engenhla izosiza umntwana ukuba agweme umuzwa wokuba yimfihlo futhi athole ukulala okungcono kakhulu.
Esitolo sikaMama Nezingane, izikhwama zokulala zikhiqizwa ngezigaba ezintathu ezahlukene. Ngokusekelwe ekwakhiweni komugqa womkhiqizo, izikhwama zokulala zihlukaniswa zibe izikhwama zokulala ezinemikhono, izikhwama zokulala ezinama-hood kanye nama-ovaroli alula. Lapho:
Isikhwama sokulala esinezingalo yisikhwama sokulala esiklanywe ngezingalo ezimbili ezengeziwe nhlangothi zombili, ukuze silingane ubude bezingalo zezingane ezincane. Imininingwane yedizayini ithuthukisa ukuqina kwesikhwama sokulala. Umugqa womkhiqizo unamandla okugcina izandla zifudumele kahle uma zisetshenziswa ebusuku.
Isikhwama sokulala esine-hood yisikhwama sokulala esifakwe i-hood evala phezulu kwekhanda. Ngezinye izikhathi imininingwane yesigqoko ibuye isetshenziswe njengomcamelo omncane wokusekela ikhanda lomntwana. Umkhiqizo usiza ukugcina ikhanda lifudumele ukuze kuncishiswe ukwenzeka kwamakhaza lapho isimo sezulu siphenduka umoya.
Isikhwama sokulala sesitayela se-ovaloli sibhekwa njengomugqa womkhiqizo onomklamo olula kakhulu. Ngoba omama bangafaka amathikithi esikhwameni ngendlela efanayo nalapho ugqoke ama-ovaloli ezingane. Umkhiqizo usekela ukufudumala komzimba wonke futhi unikeza umphumela ophakeme kakhulu wokulwa nokushelela phakathi kwezikhwama zokulala zanamuhla.
Isikhwama sokulala singahlanzwa ngomshini noma ngesandla futhi sigcine ikhwalithi yangempela. Kodwa uma ufuna ukuthola umphumela ongcono kakhulu wokuhlanza, ngisancoma ukuthi ugeze isikhwama sokulala somntanakho ngesandla. Ngoba ukunyakaza kwezandla lapho ugeza kuzosiza ungqimba lokungcola namabhaktheriya ahlanzwe kahle.
Emakethe namuhla, izikhwama zokulala zikhiqizwa ngemikhiqizo eminingi ehlukene kusukela ekudumeni kuya phezulu. Kodwa lapho isikhwama sokulala sinenani elizwakalayo kodwa sisaqinisekisa ikhwalithi ephezulu umugqa womkhiqizo ovela ku-brand Bestway, TNTE kanye ne-Camel, …
Ngakho-ke, isikhwama sokulala sezingane esisetshenziswa kaningi siwumugqa womkhiqizo obaluleke kakhulu omama abangakhetha ukuwuthenga. Kholwa ukuthi kanye nezikhwama eziphezulu ezingu-5 zokulala ezingcono kakhulu, omama banabukeni bazoletha ubuthongo obuhle ezinganeni zabo amahora amaningi.
Đánh giá Top 10 kem chống rạn da cho bà bầu hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang